शनिबारदेखि वीरगञ्जबाट हराएका दुईजना बालक पटनामा भेटिए — Imandarmedia.com
११३ वर्षीया बालिका बलात्कर गरेको आरोपमा एक युवकलाई १८ वर्ष कैदको फैसला
२काठमाडाैंमा फेरि बर्डफ्लु देखियाे, कुखुरा र दाना नष्ट
३मलेसियामा कोरोना विरुद्धको पहिलाे भ्याक्सिन शुरू
४ओली-प्रचण्डसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने नगर्नेबारे कांग्रेसले गर्यो यस्तो निर्णय
५दक्षिण कोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन गर्दा नेपाली खुशी
६हात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
७प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता
८गृहले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई किन जारी गर्यो यस्तो सर्कुलर
९दक्षिणकालीमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
१०भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरको सङ्केत : ४ राज्यमा एक हप्तादेखि निको हुनेभन्दा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या बढी
११देउवाले बोलाए कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक
१२‘नेकपा’ नामको विवादमा सुनुवाइ सकियो, के आयो सर्वोच्चले निर्णय ?
१आफ्नै ‘साइबर सेनाकै कारण सार्वजनिकरुपमै प्रधानमन्त्रीको भयो यस्तो ‘लाज’, अब के गर्लान ?
२सर्वोच्च अदालतले ढुंगेलको पक्षमा आदेश दिएपछि देशभर तरंग, कसरी उल्टियाे फैसला ?
३बिहीबारदेखि ३ दिनसम्म कहाँ कहाँ हुदैछ पानी र हिमपात ? यस्तो आयो मौसमसम्बन्धि जानकारी
४आफ्ना कमाण्डर प्रचण्डलाई चिडियाखानामा हाल्छु भनेका बादलको भित्री प्लान केछ ?
५आजदेखि कहाँ कहाँ पर्दैछ पानी र हिमपात ? यस्तो आयो मौसमसम्बन्धि ताजा जानकारी
६सर्वोच्चले ओलीलाई बल्ल दियो अहिलेसम्मकै कडा आदेश, हेर्नुहोस आदेशसहित
७‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री ओली मिलेर नयाँ पार्टी खोल्दैछन्’
८नेपालमा फेरि न्युन चापीय प्रणालीको असर देखिएपछि मौसम सम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो जानकारी
९तिन दिनसम्म मौसममा हुँदैछ यस्तो बदली, बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना
१०काठमाडाैंमा समेत हिउँ परेका बेला मौसमसम्बन्धि यस्तो आयो ताजा अपडेट, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
११भागरथीको मोबाइलमा रहेका मेसेज, भिडियो, अडियो र कल विवरणबारे खुल्याे नयां रहस्य, प्रहरी समेत चकित
१२म्यानमारको सेनाविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बाइडनको चेतावनी, अब के होला ?
शनिबारदेखि वीरगञ्जबाट हराएका दुईजना बालक पटनामा भेटिए
काठमाडाैँ । वीरगञ्ज शनिबारदेखि हराएका वीरगञ्जका दुई बालक भारतको बिहार राज्यको राजधानी सहर पटनामा फेला परेका छन् । वीरगञ्जका व्यवसायी जगरनाथ कलवारका छोरा शिवेश गुप्ता (तेजस) र वीरगञ्ज–४ विर्ता बस्ने दिपेश शर्माको छोरा प्रनेश शर्मा पटनामा फेला परेका हुन् ।
वीरगञ्जकै गौतम स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्यनरत दुवैजना बालक शनिबारदेखि बेपत्ता थिए । भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा उनीहरुलाई पटनामा फेला पारेको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रहरी निरीक्षक राजेश राज पुरीले जानकारी दिए ।
‘पटना पुगेका रहेछन्, भारतीय प्रहरीले फेला पारेर जसनपुर थानामा राखेको छ,’ प्रहरी निरीक्षक पुरीले भने, ‘गलत हातमा परेको भए समस्या हुन्थ्यो । समयमै समन्वय गरेर फेला पार्न सफल भएका छौं । अभिभावकको साथमा समन्वय गर्न प्रहरी पनि गएको छ ।
त्यस्तै बालकहरु भारततिर गएको हुन सक्ने आशंका सिसिटीभी क्यामेराको फुटेजबाट मिलेको थियो । उनीहरुलाई साईकल सहित बिहान १०ः५३ बजे सिगरेट फैक्ट्री रोडमा सुर्या हस्पिटल अगाडीबाट मालपोत चौक तर्फ गइरहेको सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजबाट पत्ता लागेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रहरीले भारततर्फ खोजी कार्य अघि बढाएको थियो ।
होम ट्युसन पढेर निस्केको छोरा घर नफर्केपछि तेजसको खोजी गरिएको र साथी प्रनेश पनि घरमा नभएको जानकारी मिलेको व्यवसायी जगरनाथ प्रसाद कलवारले बताए । आफन्त साथीभाइकोमा नभेटिएपछि खोजीका लागि प्रहरीको सहयोग लिइएको थियो ।
संसद पुर्नस्थापना भएको २४ घण्टापछि ओलीले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया, प्रचण्ड-नेपाल फायर
बालुवाटरदेखि सितलनिवाससम्म तरंग पैदा हुनेगरी प्रचण्ड–नेपालले देउवालाई पठाए यस्तो सन्देश
दुर्घटना परि घाइते चारजना उद्धार गरी प्रदेश प्रमुख झाले अस्पताल पुर्याए
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनसहित एकजना पक्राउ
कुलमान घिसिङले नभई आफैंले लोडसेडिङ हटाएको ओलीको दाबी
प्रदर्शनलाई व्यापक बनाउन देउवाको अपिल
युएईले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने सरकारकाे घोषणा
दरबार हाइस्कूलमा विद्यार्थीकाे सङ्ख्या बढेपछि सिट बढाइयो
यस्तो काण्डमा संलग्न रहेको खुलासा भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता पक्राउ, पार्टीबाट निष्कासित
भारतको यात्रा भुलेर पनि नगर्न अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनको आदेश, यस्ताे गम्भिर छ कारण